Liverpool Oo Dooneysa Inay 75 Milyan Ginni Ku Soo Iibsato Xiddiga Sevilla Jules Kounde.
HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo dooneysa inay 75 milyan ginni ku soo iibsato xiddiga Sevilla Jules Kounde.
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku hayso inay bixiso qiimaha lagu burburin karo qandaraaska daafaca dhexe ee Sevilla Jules Kounde bishaan.
23-sano jirkaan ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda ka dhisan La Liga, iyadoo kooxaha sida Chelsea , Manchester United iyo Real Madrid ay dhamaantood xiiseynayaan xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska.
Si kastaba ha ahaatee, El Nacional ayaa ku warameysa in Liverpool ay diyaar u tahay inay bixiso lacagaha lagu burburin karo qandaraaskiisa Kounde oo ah €90m (£75m) si ay ula soo saxiixato bisha Janaayo, iyadoo daafaca uu sidoo kale doonayo inuu u wareego Anfield.
Warbixintu waxay intaa ku dartay in Sevilla ay aad ugu baahan tahay inay sii haysato Kounde ilaa xagaaga, iyadoo agaasimaha kubada cagta Monchi uu qarka u saaran yahay inuu wadahadalo la yeesho daafaca si uu isugu dayo inuu ku qanciyo inuu sii joogo.
Jurgen Klopp ayaa la aaminsan yahay inuu Kounde u aqoonsaday bartilmaameedkiisa koowaad ee daafaca, waxaana uu ku wargeliyay madaxda kooxda inay qortaan xiddiga reer France bishaan isagoo ka cabsi qaba in kooxda ay xafiiltamaan ay isku dayaan saxiixiisa xagaaga.
Kounde ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxda Sevilla oo haatan ku jirta kaalinta 2-aad ee kala saraynta horyaalka La Liga isaga oo saftay 17 kulan oo horyaalka ah 9 kulana shabaqiisa ilaashaday xilli ciyaareedkan.